बुझ्नुहोस्। ब्रान्डमा हुनुहोस्। विश्वास निर्माण गर्नुहोस्। | Martech Zone
सोमवार, जुलाई 27, 2009 बिहीबार, सेप्टेम्बर 19, 2013
जबकि इन्टरनेटमा आधारित मार्केटिंग रणनीतिहरू केहि बोरिंग पुरानो प्रिन्ट विज्ञापनको तुलनामा कूलर हुन सक्छ, जुन शीतलता कारकले तपाईंलाई आधारभुत ब्रान्डि work कार्य गर्नबाट राहत दिदैन। सबै टचपोइन्टहरू तपाईंको लक्षित श्रोताहरूसँग तपाईंको ब्रान्ड प्रेम बृद्धि गर्न प्रमुख अवसरहरू हुन्।
बुझ्नुहोस् कि कुराकानीको अर्को पक्षमा व्यक्तिले कसरी डिजिटल टेक्नोलोजी प्रयोग गरिरहेको छ। उनी कुन तहमा तपाईसँग यस टचपॉइन्टमा संलग्न हुन खोलेकी छ? यदि उनी व्यवसायको दिनमा पाठ्यक्रमको क्रममा उनको इमेल जाँच गर्न व्यस्त छिन् यदि उनी तीन ब्याक-टु-बैक मिटिंगमा भाग लिनु भन्दा पहिले, के उनी वास्तवमै तपाईको घाँटी भित्र केही अप्राकृतिक प्रस्तावको साथ सास फेर्न चाहन्छिन? उपयोगी जानकारी, के तपाईंलाई थाहा छ उनी चाहान्छिन्, बढी उपयुक्त हुन्छ? हुनसक्छ। नहुन सक्छ। बुझ्न खोज्नुहोस्। र त्यसपछि तपाईंको बुद्धिमत्ता सन्देश क्राफ्ट गर्न प्रयोग गर्नुहोस् र अधिक प्रभावकारी रूपमा मिडिया प्रयोग गर्नुहोस्।
सँधै त्यस्तो व्यवहार गर्नुहोस् जुन तपाईंको ब्रान्डको वचन र व्यक्तित्वसँग मिल्दो छ। ब्रान्ड ब्यबश्थापन भनेको निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको लोगो सही ठाउँमा देखा पर्दछ र सही रंगहरू सबै समय प्रयोग गर्दछ। ती चीजहरूले मद्दत गर्न सक्छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, प्रत्येक टचपोइन्ट तपाईको ब्रान्ड प्रदर्शन गर्न र विश्वास स्थापना गर्न वा विश्वासलाई सुदृढ पार्ने अवसर हो। के त्यो अपमानजनक प्रस्ताव माथि छलफल गरिएको तपाइँको ब्रान्डको साथ वास्तवमा अनुरूप छ? यदि अपमानजनक र विघटनकारी तपाइँको ब्रान्डको अंश हो (यसका साथ राम्रो भाग्य), त्यसपछि प्रस्ताव गर्नुहोस्। तर, यदि तपाइँको दर्शकले तपाइँलाई केहि फरकको रूपमा चिन्नुहुन्छ भने, तपाइँको सञ्चारलाई पुनःप्रकार गर्नुहोस्। जे भए पनि तपाईलाई को हो र तपाई केको लागि उभिनुहुन्छ भनेर जान्नुहोस् र विश्वास निर्माण गर्न त्यो ब्रान्डमा डेलिभर गर्नुहोस्।
बुझ्नुहोस् कि दर्शकहरूले कसरी मिडिया र ई-मेल तपाईसँग डेलिभर गर्ने कुराकानी गरिरहेका छन्। काम पक्कै पनि गरिएको छैन किनभने तपाईंले जाने धकेल्नुभयो। डाटा, संवाद, वा कुनै अन्य प्रतिक्रिया प्रयोग गर्नुहोस् तपाईको श्रोताको व्यवहार बुझ्नुहुन्छ र तपाईंको रणनीतिहरू, योजनाहरू र कार्यान्वयन समायोजन गर्नुहोस्।
टैग: ग्लोबिजछुट्टीको चलनpinterest पदोन्नतिउपकरणवायरफ्रेम उपकरणहरूयुरी राइट
समान सामग्री बिभिन्न वितरण
राम्रो पोस्ट, निला! धेरै मानिसहरूले बिर्सन्छन् कि दर्शकहरू कुनै पनि ब्रान्डिङ रणनीतिको लागि कुञ्जी हो। यो पोस्ट गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद!